Home Wararka Ciidanka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya oo dad shacab ah laayay
Ciidanka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya oo dad shacab ah laayay
Ma aha markii ugu horeeysay oo dad shacab ah lagu laayay dalka Itoobiya, Waxa ay iska noqotay wax caadi ah in maalin kastaa dad shacab ah lagu dilo Itoobiya.
Wararka ka imaanaya Waqooyiga Itoobiya gar ahaan ismamuulka degaanka Tigreega ayaa sheegaya inay ciidanka Tigreega ee loo yaqaano Agazi ay dad shacab ku layeen degmada Dansha.
Degmada Dansha waxaa in mudo ah ka socday raabsho iyo kacdoon ay wadeen qoowmiyadda Qomiyada Wolkayit oo didaan in ay hoos nooladan Qomiyada Tigreega. Ciidanka gaarka ee leyihiin Ismaamulka Tigreega loo yaqaano Agazi ayaa rasaas kufuraan shacabka kasoo jeedo Qomiyada Wolkayit. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintaay iyo dhowr qof oo kale ayaa dhawaac garaay.
Qomiyada Wolkayit waxa ku abtirsadaan Qomiyada Axmaraada lakiin mamuul ahaan waxaay hoos yimadaan Ismaamulka Tigreega. Ariintan wuxuu keenay isku dhacyo farabadan udheexeyo Qomiyada Wolkayit iyo Ismaamulka Tigreega.
Isku dhacaan ayaa ku soo aadayo iyada oo xirirka u dhaxeeya hogaanka Qowmiyada Tigreega iyo dowlada uu hogamaiye Abiy Axmad uu meel xun maraayo
Previous articleU.S. Africa Policy Cannot Afford to Ignore Somaliland
Next articleFarmaajo & Kheyre oo isku haya cidda hoggaamin layad guddiga wadahadalada Somalia & Somaliland